Nubia Red Magic 3S waxaa si rasmi ah looga bilaabay Yurub | Androidsis
Nubia waxay noqotay mid kamid ah astaamaha ugu muhiimsan dhanka telefoonada ciyaaraha, iyadoo dhowr nooc illaa iyo sanadkaan la joogo. Mid ka mid ah kuwii ugu dambeeyay ee noociisu ahaa Nubia Red Magic 3S, la soo bandhigay bilowgii Sebtember si rasmi ah. Hal bil kadib, ayaa lagu dhawaaqay daahfurka qaabkan Yurub.
Nubia Red Magic 3S waa ikhtiyaar aad u dhameystiran oo ku saabsan berriga casriga casriga ah, oo sii kordheysa si heer sare ah bilaha. Nooca Shiinaha ayaa mar hore naga tagay moodooyin kala duwan sannadkan dhinacyo kala duwan, laakiin waxay ahmiyad gaar ah siiyeen qeybta ciyaarta.
Naqshadaynta taleefanka Ma aysan soo bandhigin isbeddelo aad u tiro badan marka la barbar dhigo kii ka horreeyay. Nooca Shiinaha ayaa nooga tagaya taleefan leh naqshad cayaareed oo cad, oo leh khadad dagaal badan oo calaamadeysan, laakiin markasta laga fikiro inuu na siiyo waxqabad wanaagsan, taas oo shaki la’aan ah cunsur kale oo muhiim u ah taleefanka sidan oo kale ah.
Nubia Red Magic 3S waa taleefan aad u awood badan, oo loogu talagalay na sii waxqabadka ugu badan marka aan ciyaareyno. Taleefan leh processor-ka ugu fiican marka la eego macnaha, shaashaddiisu wanaagsan tahay xagga tayada iyo heerka cusbooneysiinta iyo batteri leh awood wanaagsan, kuwaas oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee noocyada taleefannada maanta. Marka waxay u timaaddaa sidii ikhtiyaar ugu dhammaystiran ee qaybtan suuq ee loogu talagalay dadka isticmaala. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
Isbedelka processor-ku wuxuu ahaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan Nubia Red Magic 3S. Tan iyo markii shirkadda ayaa sharad ku leh Snapdragon 855 Plus xaaladdan, taas oo ah processor-ka ugu awoodda badan oo si gaar ah loogu bilaabay taleefannada ku jira qaybtan ciyaaraha. Marka processor-kan ayaa si buuxda uga faa'iideysanaya taleefan kan oo kale ah sumadda Shiinaha. Batarigu wuxuu leeyahay awood 5.000 Mah, oo wanaagsan, oo ku habboon ciyaaraha dheer.
Telefoonku wuxuu hayaa walxaha muhiimka ah ee astaanta, sida joogitaanka geesaha xasaasiga ah ama iftiinka RGB. Waa cunsurro muhiim u ah taleefanka gacanta ee loogu talagalay ciyaaraha, taas oo dadka isticmaala ay sidoo kale si guud u qiimeeyaan. Waxay ku timaadaa laba nooc oo RAM ah iyo keydinta suuqa, oo aan horeyba ugu arki karnay soo bandhigideeda rasmiga ah bishii Sebtember.
Nubia Red Magic 3S Waxaa lagu iibin doonaa Yurub 16-ka Oktoobar si rasmi ah. Isticmaalayaashu waxay awoodi doonaan inay si toos ah uga iibsadaan taleefankan bogga rasmiga ah ee shirkadda. Waxaa lagu bilaabay qaabkan Yurub oo dhan, oo ay ku jiraan Spain. Bilaabida xiisaha weyn ee qaybtan ciyaaraha.
Telefoonku wuxuu ku bilaabmayaa laba nooc oo RAM ah iyo keydinta gudaha ah. Intaa waxaa dheer, waan awoodi doonnaa kala doorto dhowr nooc marka loo eego midabada markan. Tan iyo markii Nubia Red Magic 3S lagu bilaabay midabka 'Cyber ​​Shade color' (casaan iyo buluug), qaabka loo yaqaan 'Eclipse Black' (madow iyo casaan) iyo codka Mecha Silver (cawl iyo faahfaahin casaan ah). Waa saddexda midab ee aad ka arki karto sawirka kore. Intaas waxaa sii dheer, qiimaha rasmiga ah ee Yurub horay ayaa loo xaqiijiyay:
Qaabka leh 8/128 GB waxaa lagu bilaabay qiime dhan 479 euro.
Nooca leh 12/256 GB ayaa laga bilaabay Yurub iyadoo lagu qiimeeyo 599 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Nubia Red Magic 3S waxaa si rasmi ah looga bilaabay Yurub